Muqdisho oo maalintii 2-aad ay ka dhaceen dagaallo & madaafiic lagu garaacay xaafadaha qaar oo ay dad rayad ahi ku dhinteen. – Radio Daljir
Muqdisho oo maalintii 2-aad ay ka dhaceen dagaallo & madaafiic lagu garaacay xaafadaha qaar oo ay dad rayad ahi ku dhinteen.
Janaayo 28, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Jan 29 ? Maalintii labaad ayaa magaalada Muqdisho si xiriir ah waxaa uga soconaya dagaallo xooggan oo u dhaxeeyey ciidamada dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo xoogagga mucaaradka ah ee ku kacsan.
Dagaalladaan oo ahaa kuwo la isku adeegsanayey hubka nooyadiisa kala duwan ayaa illaa iyo shalay si lixaad leh uga socday magaalada Muqdisho, waxaana illaa iyo haatan inta la xaqiijiyey dagaallakaasi ku dhimatay 15 qof halka in ka badan 27 kalana ay ku dhaawacmeen.
Dagaalkii ugu xooganaa waxaa uu dhacay saqdii dhexe ee habeennadiii xalay ahayd, wuxuuna ahaa mid la isku adeegsaday madaafiic culcus oo badankeeda ay ridayeen ciidamada nabad illaalinta ee AMISOM iyo kuwa dawladda federaalku.
Dagaalka oo ay qaadeen xoogagga dawladda ku kacsan ayaa ka dhacay ugu yaraan 5 goobood oo kala duwan oo ay xoogagga mucaaradka ahi ka soo waarareen ciidamada dawladda.
Dagaalku wuxuu ku bilawday madaafiic iyo hoobiyayaal aan loo meel dayin kuwaasi oo si talan-taalli ah ugu dhacayey goobaha ay fariisamada ku leeyihiin ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM, waxaana ka mid ahayd meelihii la weeraray aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Qaar ka mid madaafiicda dhinacyada dagaallamayaa ay is wadaarsanayeen ayaa ku habsaday guryo ay degganaayeen carruur iyo habeen, waxaana guri ka mid ah guryahaasi ku naf waayey hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay.
Dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa lagu tilmaamay in uu ahaa midki ugu baaxadda weynaa dagaalladii muddooyinkii danbe ka dhacayey magaalada Muqdisho, wuxuuna qayb ka ahaa dagaallada xoogagga mucaaradku ay ku hayaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM.
Warbixin: Safarada Madaxweynaha dawlada Puntland ee dalalka Jibouti, Ethiopia & Libya.